Tag: lakile fampiharana finday | Martech Zone
Tag: lakile fampiharana finday
Talata, Oktobra 25, 2016 Mehul Rajput
Ianao ve mitady hamoaka ny fampiharana lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'izao tontolo izao? Okay, mino anao izahay, fa diniho aloha ireto toro-hevitra ireto amin'ny fomba ahafahanao mametraka izany mba hahomby. Ny rindranasa mangatsiatsiaka dia tsy ny zavatra ahazoanao fahombiazana, fa koa paikady marketing tsara sy hevitra tsara. Aza mitsahatra mamaky mba hahitana ny fomba ahafahanao manana ny Crush Crush manaraka amin'ity taranaka ity: Midira ao
Alakamisy 14, 2013 Alakamisy 14, 2013 Douglas Karr
Mahagaga ahy foana ny isan'ny sehatra sy rindranasa maro hafa mbola tsy reko na dia mihaino ny farany aza isika. Rehefa avy nahalala momba an'i Bunndle aho dia nizara ny sehatra tamin'ireo mpanohana anay ao amin'ny Mindjet. Manana rindranasa mahafinaritra 3 izy ireo - Mindjet, Mindjet Tasks ary Conspire - ilay famoahana tsy mampino. Ny CMO an'ny Mindjet, Jascha Kaykas-Wolff, avelao aho hahafantatra momba ny SensorTower, sehatra iray hanampiana anao hanara-maso sy hanatsara ny rindranasa findainao.